Iindaba -Bejarm abavelisi bemizi mveliso abaxhamla abasebenzi kwiworkshop
Abavelisi be-Bejarm Industrial fan baxhamla abasebenzi kwiworkshop
Bejarm umenzi mveliso mveliso - SUZHOU Bejarm Technology Co., Ltd.ye inxaxheba kumasifundisane zokupholisa ishishini umoya iminyaka eli-17. Abalandeli bayo beshishini, izixhobo zokhuselo lokusingqongileyo kunye nezinye izixhobo zokupholisa ziye zaqonda ukupholisa umasifundisane kunye nokungenisa umoya kumashishini angama-6000. Kwiindibano zocweyo esidibana nazo, sihlala sizibona iingxaki ezinje ngokubethwa bubushushu, ukwenzakala okunxulumene nomsebenzi, isifo emsebenzini, ukuyeka emsebenzini, njl.njl.ubangelwa bubushushu obuphezulu, uthuli, ivumba elikhethekileyo, kunye nokuhamba komoya okungafanelekanga njalo njalo. Amashishini ahlala efuna "ukuhlawula" kwezi ngxaki ze
abasebenzi, singasathethi ke ngexabiso eliphezulu, ihlala ichaphazela ukusebenza kwemveliso, yongeza umjikelo wokuhanjiswa kwaye ibangela ilahleko enkulu ngenxa yezo ngxaki.
Njengomvelisi womenzi mveliso eSuzhou, esekwe kwesi sixeko sidumileyo. I-Bejarm iseke ixabiso lenkcubeko "lokudala izibonelelo kuluntu, ukwenza ingeniso kubasebenzi kunye namaqabane, kunye nokwakha imeko yokusebenzela engcono kubasebenzi beworkshop" ekuqaleni kokusekwa kwayo. Kunokuthiwa ukufaneleka kule minyaka ikhoyo kwaye isibonelelo silele kwikamva.
Emva kokuba ifeni yemizi-mveliso eveliswe yinkampani iBejarm ifakiwe kumasifundisane, ngokujikeleza kwebala elikhulu le fan, umoya wangaphakathi uqhutyelwa phezulu kwaye nevumba elibi langaphakathi liyakhutshwa ngaphandle kwegumbi, eliqinisa isiphumo sokungenisa umoya ngaphakathi. Ukujikeleza okuqhubekayo kwefeni yezentengiso kuzisa umoya ojikelezayo ombini, owenza ukuba abantu bazive bepholile, yimvakalelo efanayo ngathi uphuma echibini lokuqubha kwaye iqondo lobushushu lomzimba uziva umohluko phakathi kwe-5 kunye ne-7 ℃, ekhululekile kakhulu.
Ngempepho elungileyo kunye nesiphumo sokupholisa, kunzima ukubona iingxaki ezinje ngeqondo lobushushu eliphezulu, uthuli, ivumba elikhethekileyo, kunye nokuhamba komoya okungafanelekanga kumasifundisane. Isangqa esilungileyo sizisa ukuncitshiswa okucacileyo kwe-heatstroke, ukonzakala kwemizi-mveliso, isifo emsebenzini, kunye nokushiya emsebenzini.
Ukongeza, iindleko zotyalo-mali kunye nokusebenza kwabalandeli bemizi-mveliso ziphantsi kakhulu. Thatha i-7.3m fan fan njengomzekelo, fan enye inokukhathalela indawo ye-1800 yeemitha zesikwere, ngelixa ukusetyenziswa kwamandla kumalunga ne-1 isidanga ngeyure, kwaye akukho mfuneko yokufaka iintambo ezinzima. Imveliso elungileyo enjalo kufuneka ifakwe ngokukhawuleza. Ukufumana ezinye izisombululo zeshishini, nceda tsalela umnxeba: